Sarkaal ka tirsan Ciidamada wadooyinka ee Trafikadda oo kugacan seyray in uu fahfahain ka bixiyo lacago la sheegay in uu diray – The Voice of Northeastern Kenya
Sarkaal ka tirsan Ciidamada wadooyinka ee Trafikadda oo kugacan seyray in uu fahfahain ka bixiyo lacago la sheegay in uu diray
starfmke August 17, 2016
Mid kamid ah ciidamada wadooyinka ee loo yaqaano Trafikadda ayaa kugucan seyray in uu wax fahfaahin ah ka bixiyo lacago la sheegay in uu u dirayay saaxibkaasi waxuuna sarkaalasi sheegay in arintaasi ay tahay mid shaqsiyadeed.
George Okeyo oo ka howli gali jiray Countiga Bungoma gaar ahaan waxaa uu rondo ka samneynayay deeganka Kimilili ayaa mashaqa iyo su’alo adag kala kulmay xubna katirsan gudiga qaran ee adeega booliska kuwaaas oo turxaan bixin kusameynayay.
Mas’uuliyiinti sarkaalkaasi kuhayay turxaan bixinta ayaa ku eedeyay mr Okeyo in uu dispilin laheen islamarkaana ixtiraameynin xubnaha gudiga adeega booliska oo su’ala weydinayay.
Sarkaalkan katirsaan ciidamada wadooyinka ay si adag oga soo horjestay su’aalihii la weydinayay waxuun u sheegay Mary Owur ah haweeneydi hogaamineysay komishandaasi in aan lagu qasbin in uu fahfaahin ka bixiyo ;lacagtaasi oo uu u diray gabar ay saaxibo ahaayen.
Waxaa uu intaa kudaray in uusan diyaar u aheyn in uu goobtaasi ay ka dhaceysay turxaan bixinta oga hadlo arintaasi isagoo sheega in lacagtaas ii oo gareysay 240,000 uu u diray gabadha si ay ugu sii wadato aqriskeeda maadama ay aqrisato shahaadada degreega.
Mr Johnston Kavuludi oo ah gudoomiyaha gudigaasi ayaa canaan la dul dhacay sarkaalkaasi isagoo sheegay in sababta uu fahfaahin oga bixin la’yahay su’ala la weydinayo ay tahay falalki ay ku dhibaateynayeen shacabka oo uu ola jeeday in laalusha ay qaadaneyeen isaga iyo ciidamadii kale ee halkaasi ka howljiray.
← Ninkii goor hore tooreeyay haweeney ajaanib ah oo dalka kusugneed oo maxkamada la soo taagay
Haweeney isku dayday in ay Isbitaalka Garissa ka xado cunug yar oo dhalaan ah oo maxkamada la soo taagay →